सपनामा सर्प देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ संकेत ! ॐ लेखी शेयर गरौं – Khabar PatrikaNp
November 28, 2020 2294
जनावरहरु सपनामा देखिनुले धेरै संकेत गर्दछ । त्यस्तै सर्प सपनामा देखिनु पनि विभिन्न जीवनका घटनाहरुसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख छ।
Prevजस्तोसुकै बिजि भएपनी एकपटक अवस्य पढौ ! नपढे तपाइलाइ पछुतो हुनेछ !
Nextशनिबारको दिन भुलेर पनि यि काम कहिल्यै नगर्नुहोस्….
विश्वकै सबैभन्दा रहस्यमयी गाउँ, जहाँ गएका कोहि पनि फिर्ता आएनन् …
नेपालीले फागुनसम्म कोरोनाको खोप नि:शुल्क पाउँछन् : स्वास्थ्य मन्त्री
वरिष्ठ पाइलट विजय लामा कोरोना संक्रमण निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज